Egwuregwu ndị na-emepụta mmiri na ndị na-ebunye ya - China Egwuregwu karama mmiri
2500ml nnukwu ike sports karama. Na aka mkpanaka, na-erikpu ma na-adịgide adịgide. Nkpuchi mkpuchi nkpuchi, mfe imeghe. Enye gị ohere iji na-arụ ọrụ na otu aka n'oge omumu. A kwadebere n'ime ime ihe nzacha na nri, yana ihe na-enweghị mmetụ gburugburu BPA na-enye gị ohere ichedo okike mgbe ị nọ nso okike.
Ma ọ bụ ndụ kwa ụbọchị, njem obodo, njem ezumike ma ọ bụ egwuregwu n'èzí. Unu niile nwere mkpa hydration kwa ụbọchị, yabụ ngwa ngwa ọ idealụ drinkingụ dị ezigbo mkpa. Ike zuru oke nke 1500ml, njikwa aka, nnukwu oghere maka njuju na nhicha dị mfe. Ndị dị otú ahụ a mmiri kalama bụ doro anya na nhọrọ kasị mma.